एजेन्सी, ७ असोज । स्विडेनकी १६ वर्षीया ग्रेटा थुनबर्गले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलनमा गरेको भाषणबारे यतिबेला विश्वभर चर्चा भइरहेको छ ।
सोमबार संयुक्त राष्ट्रसंघले आयोजना गरेको जलवायुसम्बन्धी सम्मेलनमा थुनबर्गले निकै भावुक र आक्रोशित मुद्रामा जलवायु परिवर्तनबारे आफ्नो कुरा राखेकी थिइन् ।
विश्व नेताप्रति लक्षित उक्त भाषणमा जलवायुको मुद्दालाई समाधान नगरे भावी पुस्ताले उनीहरुलाई माफ नगर्ने थुनबर्गको भनाइ थियो । ‘भावी पुस्ताले तपाईंलाई हेरिरहेको छ’, उनले भनिन्, ‘यदि तपाईंका कारण समेत असफल भयौं भने हामीले तपाईंलाई कहिल्यै माफ गर्ने छैनौं ।’
त्यस्तै जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न समस्यालाई समाधान गर्न विश्वका नेताहरु असक्षम भएको बताइन् । युवा पुस्तालाई समेत असफल बनाएको उनको आरोप थियो । ‘तपाईंका कारण हामी समेत असफल भइरहेका छौं’, थुनबर्गले भनिन्, ‘र तपाईंले हामीलाई धोका दिनु भएको छ भनेर हामीले बुझ्दै छौं ।’
त्यस्तै हरित गृह ग्यास कटौती गर्ने कार्यमा विश्व समुदाय चुकेको समेत थुनबर्गको भनाइ थियो । कार्बन उत्सर्जन घट्ने गरी कुनै कार्य नगरेमा विश्वमा निकै ठूलो संकट आउने समेत उनको भनाइ थियो ।
यस्तो छ थुनबर्गको मन्तव्य (सम्पादित अंश) :
सबैभन्दा पहिला हाम्रो पुस्ताले तपाईंहरुको निगरानी गरिरहेको छ भनेर बताउन चाहन्छु ।
तपाईंहरुले जे गरिरहनु भएको छ, त्यो गलत छ । म विद्यालय जानुपर्ने बालिका हुँ तर यहाँ आएर बोल्नु पर्ने अवस्था कसले निम्त्यायो ? भविष्यका लागि तपाईंहरु हाम्रो पुस्तामाथि भर पर्नु भएको छ । तपाईंहरुले यस्तो आँट कसरी गर्नु भयो हँ ?
खोक्रा शब्दमार्फत् तपाईंहरुले मेरो सपना चोर्नु भएको छ, मेरो बाल्यकाल लुट्नु भएको छ । तर पनि म आफूलाई भाग्यमानी नै ठान्छु ।
अहिले मानिसले निकै दु: ख पाइरहेका छन् । मानिसहरु दिनदिनै मरिरहेका छन् । पूरा इको सिस्टम नै ध्वस्त हुँदै छ । सबै कुरा लोप हुने अवस्था पैदा भएको छ । तर तपाईंहरु खाली पैसाको बारेमा मात्रै कुरा गर्नुहुन्छ । निरन्तर आर्थिक वृद्धिबारे मात्रै कुरा गर्नुहुन्छ । तपाईंलाई यस्तो साहस कहाँबाट आउँछ हँ ?
झण्डै ३० वर्षयतादेखि सारा विश्व नै खतरामा छ भनेर विज्ञानले प्रस्ट पारेको छ । तर यो कुरालाई किन पटक-पटक बेवास्ता गर्नुहुन्छ ? यो समस्यालाई समाधान गर्ने भनेर राजनीतिक तहमा कुनै छलफल भएको छैन । तर यहाँ आएर यो समस्याबारे धेरै नै गरेका छौं भन्ने आँट कहाँबाट पाउनुहुन्छ हँ ?
जलवायुबारे हामीले उठाएको कुराप्रति पूरा ध्यान गएको छ र यसलाई तत्काल समाधान गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ । तर तपाईंले बुझ्नु भएको छ भन्ने मलाई लाग्दैन । र यदि अहिलेको अवस्थालाई बुझेर पनि यसबारे कुनै कदम चाल्नु भएन भने तपाईंहरु दुष्ट मानव हो ।
त्यसैले यो कुरालाई तपाईंले बुझ्नु भएको छ जस्तो मलाई लाग्दै लाग्दैन ।
कार्बन उत्सर्जनलाई १० वर्षमा आधा घटाउने लक्ष्यले विश्व तापमान वृद्धिलाई १. ५ डिग्रीभन्दामुनि राख्न सकिएला तर यस्तो संभावना पनि ५० प्रतिशत मात्रै छ । यसबाट हामीले नियन्त्रण नै गर्न नसक्ने प्रतिक्रिया चक्र सुरु हुने खतरा देखिन्छ ।
कार्बन उत्सर्जनलाई ५० प्रतिशतमा झार्ने कुरा तपाईका लागि स्विकार्य होला । तर यो लक्ष्यले जोखिमपूर्ण चरण, प्राप्त निष्कर्ष, प्रदुषित वायुका कारण सिर्जना हुन सक्ने जोखिम र समता र जलवायु न्यायसम्बन्धी अन्य पक्षलाई सम्बोधन गर्दैन ।
मेरो पुस्ताले खर्बौ टन कार्बनडाइअक्साइड खाने/लिने हो भने मात्रै यो लक्ष्य हासिल गर्न सकिएला ।‍ हाम्रो पुस्ता नै यसबाट बढी प्रभावित हुनेछ । त्यसैले ५० प्रतिशतको कुरा हामीला२ स्विकार्य छैन ।
अहिलेको समस्यालाई केबल व्यापार र प्रविधिले मात्रै समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने सोंच तपाईंको मनमा कसरी आउँछ हँ ? हालको उत्सर्जनको तह हेर्दा कार्बनलाडअक्साइडका बजेट ८ वर्षमा नै सकिने देखिन्छ । विद्यमान लक्ष्यसँग मेल खाने गरी ‍तत्कालै कुनै समाधान र योजना आउने देखिँदैन । किनभने यो दर अति नै कठिन लक्ष्य हो । तपाईंले यो कुरालाई जस्ताको तस्तै भन्न सकिरहनु भएको छैन ।
तपाईंका कारण हामीहरु समेत असफल भइरहेका छौं । र तपाईंहरुले हामीलाई धोका दिनु भएको छ भनेर हामीले बुझ्दै छौं । भावी पुस्ताले तपाईंलाई हेरिरहेको छ । यदि तपाईंका कारण समेत असफल भयौं भने हामीले तपाईंलाई कहिल्यै माफ गर्ने छैनौं ।
हामीले तपाईंलाई यो कुराबाट टाढा जान दिने छैनौं । म भन्न चाहन्छु, आजबाटै हामीले नयाँ बाटो तय गर्दैछौं । तपाईंले चाहनुस् वा नचाहनुस् तर सारा विश्व ब्युँझिएको छ र परिवर्तन हुँदै छ ।
(ग्रेटा थुनबर्गको मन्तव्यको साझापोस्टले गरेको भावानुवाद)